Uyabalisa unina kaswenka obulewe - Ilanga News
Home Izindaba Uyabalisa unina kaswenka obulewe
Uyabalisa unina kaswenka obulewe
Uthi uhleli nesithombe sobulale indodana yakhe
UNINA kaMlu Mbewana obedume ngokudla ukotini, obulawe ephuma endaweni yobumnandi eThekwini, uchitha amahlebezi okuthi indodana yakhe ibulawe kade kubangwa amantombazane.
UBALISA akaqedi unina kaswenka owaziwayo kwezobumnandi, okubikwa ukuthi udutshulwe washona ephuma endaweni yokujuxuza eseSpringfield, engenye yezidumile eThekwini.
Ekhuluma neLANGA LangeSonto uNkk Lulama Mbewana ongunina kaMnu Mlu Mbewana obulewe, uthe ufe olwembiza ngokubulawa kwendodana yakhe athi ibiyikho konke kuye, imnakekela ngendlela emangalisayo.
“Ingane yami ibiyikho konke kimina, ngihlala emzini omuhle eMthwalume ungathi yihhotela ngiwakhelwe yile ngane. Ekhaya e-Eastern Cape nakhona kwakhiwe into ongakaze uyibone, yile ngane.
“Uma kuphele inyanga bengizwa ngocingo esengikhumbuza ethi, ‘mama hamba uyobheka khona imali esengikufakele yona ebhange’.
“Izingane zakhe bezifunda ezikoleni eziphambili konke lokho asazi kuzoqhubeka kanjani. Bengilindele ukuthi afike ekhaya ngakusasa njengoba ebehlala eRichards Bay (efika uma kuphele inyanga), kwagcina kungenzekanga.
“Sithole ucingo entathakusa ngoLwesine luvela engodusweni yakhe, isazisa ukuthi ulimele. Ngizwe ngodadewabo wathi ingoduso yena imtshelile ukuthi vele useshonile wukuthi nje ubesashisa.
“Nginaso ngisho isithombe sendoda (umsolwa) edubule uMlu, bayishuthile ingaboni. Imshaye ngenhlamvu eyodwa esifubeni ma-qondana nenhliziyo.
“Into abayibangile yindaba yokuklwebheka kwemoto. Kuthiwa le ndoda iklwebhe imoto kaMlu iBMW X4, uma ebuza ukuthi kwenzenjani, lo muntu wavele waya emotweni yakhe wabuya nesibhamu wamshaya enhliziyweni.
“UMlu ubenenhliziyo encane kodwa eshesha ukuxola, angiboni ukuthi yini ebingadala ukuba adutshulwe. Ngife olwembiza.
Ngomhla ka-25 bengingenelwa yimali (ngifakelwa nguye),” kulanda unina.
Kubikwa ukuthi isigameko sokudutshulwa kukaMlu senzeke ngaphandle kwale ndawo yobu-mnandi abephuma kuyo, abantu sebegoduka njengoba kuthiwa ivalwe ngaphambi kuka-00h00 phakathi kwamabili.
Akucaci ukuthi yini imbangela yokubulawa kwakhe kodwa kunamahlebezi okuthi ingxabano isuswe wumbango wamantombazane. Kuthiwa kunothile wesifazane okuthiwa ubekade ebusiswa ngumsolwa ngeziphuzo eziphambili, kodwa okuthe sekuhanjwa, lona wesifazane wangena emotweni kamufi, kwase kuba nengxabano.
Lawa mahlebezi okuthi indodana yakhe ife kubangwa amantombazane uNkk Mbewana uwaphikile.
“Angiyazi leyo nto, ngiyibona la ezinkundleni zokuxhumana.”
UMlu uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni akubo eMthwalume, eNkambini.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokubulala emuva kokuba owesilisa oneminyaka engu-32 edutshuliwe emuva kwengxabano equbuke ngesikhathi kusukwa endaweni yobumnandi eku-Intersite Avenue, eSpringfield kanti ube esephuthunyiswa esibhedlela lapho afike washonela khona.
Umnikazi wendawo yobumnandi okwenzeke kuyo lesi sigameko uKgolo Mthembu, uthe uzwile ngokwenzekile kodwa ubengasekho yena ngesikhathi kwenzeka lokhu futhi indawo yakhe ibisivaliwe.
“Siyavala ngaphambi kokuba kushaye u-00h00 ebusuku. Akukho okuningi engingakuphawula ngoba kwenzeke (isigameko) ngaphandle kwale ndawo,” kusho yena.
Abantu abaningi bebebhala ekhasini lakhe uMbewana, beveza ukushaqeka kwabo ngokubulawa kwakhe. Ezinye zezinto abezibhalile ngaphambi kokuba abulawe ekhasini lakhe kuFacebook wumbhalo othi: “Ngikhumbule uLevel 5” kube sekungena imiyalezo abantu bethukile.
USamke Ngcobo ubhale wathi: “Uthe ukhumbule uLevel 5, ngathi ubuwazi ukuthi u-level 1 uzodlula nawe. Lala ngokuthula bhuti wethu.”
UMlu ushiye emhlabeni izingane zakhe ezimbili u-Enhle noNoluthando, yizingane zakwabo ezimbili uSindiswa noNkululeko kanye nonina.
Previous articleIntombazanyana (13) itholwe izilengisile isifile ekameleni
Next articleUkuvalwa kwezwe kumnike ithuba lokubhala izingoma